Home रोजगार विदेशिक रोजगारीको डिमाण्ड अनलाइनबाट यसरि खोज्नुस , म्यानपावर धाउनु नपर्ने
May 26, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	,2Comments
तपाइँ बिदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ। कुन देशकोको कुन कुन कोटाका कस्ता कस्ता काममा डिमाण्ड आयो होला भन्ने जान्न खोजिरहनु भएको छ। तेसो भए अब तपाइले सजिलै अनलाइन प्रयोग गरि घर बाटै हेर्न सक्नु हुन्छ। यस अघि बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु डिमाण्ड बारेमा जान हरेक म्यानपावरमा चाहार्न बाध्य थिए तर अब भने त्यस्तो दुख नगरी कन अनलाइनबाट हेर्न सकिने भएको हो । प्रबिधिको प्रयोग गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारको मागबारे जान बुझ्न खोज्नेलाई सहज बनाउन अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने बनाएको हो।
कुनै पनि दलाल वा म्यानपावरले तपाइलाई ढाटेर छलेर फसाउन सक्ने सम्भावना समेत अब कम हुने भएको छ। कुन देशका लागि कुन कुन काममा कुन कम्पनीले कस्ता माग पठाएका छन् सबै अब विभागको अनलाइन https://foreignjob.dofe.gov.np/मा गएर हेर्न सकिने भएको हो। यस प्रविधिले गर्दा सोझा साझा हरु लाइ फसाउने काम केहि हद सम्म भने पनि कम हुन् सक्ने छ। अब विदेशमा जान चाहेको काम र सीपको आधारमा वा देशको आधारमा वा पठाउने कम्पनीको आधारमा वा जागिर दिने कम्पनीको नाम राखेर अनलाइनमा हेर्ने वित्तिकै सत्यतथ्य के हो आइहाल्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुले दलाल र म्यानपावरले दिएको आश्वासनमा फसेर छालिनु पर्ने छैन। सिधै विभागको वेबसाइटमा गएर आफुले जान चाहेको देश , काम, तलब , कामदार लैजाने कम्पनी, सबै जानकारी खोजे सजिलै पाउने छ। म्यानपावर कम्पनी र दलालहरुले कामदारलाई भनेको कुरा दिएको आस्वासन सहि हो कि गलत वेबसाइटमा गएर छड्के जाच गरे सजिलै पत्ता लाग्छ। सबै कामदारले आफू जान लागेको देश, कम्पनी वा पठाउने म्यानपावरको पूर्व श्रम स्वीकृति जस्ता सबै अति आबस्यक जानकारी वेबसाइट बाट लिने सक्नेछन।
विदेश जानु अघि आफू जान लागेको देश, काम, न्युनतम् तलब ग्यारेन्टी, अन्य सुविधा रहेको नरहेको लगायतका सबै विवरण अनलाइन बाट प्रस्ट रुपमा हेर्न सकिन्छ। तेस्तै तपाइँ कुनै देशका लागि रोजगारमा जान डिमाण्ड खोजिरहनु भएको छ भने देश अनुसार आफुले जानेको काम समेत खोजि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यस बाट सर्बसाधारणले सजिलै जानकारी पाउछन भने ठगिन समेत बच्ने बिस्वास सरकारको छ।
दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपालीको बेसिक तलब नै झण्डै डेढ लाख
सिंगापुरले माग्यो नेपाली कामदार ! हेर्नुस कति छ लागत ? कति हुन्छ तलब
Posted in रोजगार.
बुबाआमाको हेरचाह नगर्ने छोराछोरीलाई ३ लाख जरिवाना, भिख माग्न लगाए ३ वर्ष कैद
तपाइको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस आज आइतबारको राशिफल
कोरियन भाषा परीक्षाको तोकियो परीक्षा केन्द्र , यस्तो छ नियमहरु ( सूची सहित )
June 2, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर , No Comment
May 31, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर , No Comment
वैदेशिक रोजगारमा जानेले श्रम स्वीकृति पाउन सीपमुलक तालिम लिएको हुनुपर्ने
May 16, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर , No Comment
kin aaudain t ke vako chhani